တသောင်းတန် ထုတ်မည်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါမည်မဟုတ် – kyat 10,000 currency is on the way | MoeMaKa Burmese News & Media
တသောင်းတန် ထုတ်မည်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါမည်မဟုတ် – kyat 10,000 currency is on the way
ဗဟိုဘဏ်က ကျပ်တသောင်းတန်ထုတ်ဝေတော့မည်ဟု ငွေစက္ကူသစ် ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာလိုက်သည်။
(ဗဟိုဘဏ် ထုတ်ပြန်ချက် မူရင်းကို သတင်းအောက်ဆုံးတွင် ကြည့်ပါ)
လလယ်ပိုင်းမှ စတင်ဖြန့်ဝေမည့် တသောင်းတန် မျက်နှာစာတွင် ထင်ရှားသည့် သင်္ကေတကို ရုတ်တရက် မတွေ့ရပေ။ ယခင် ငါးထောင်တန် ထုတ်ဝေစဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ မြတ်နိုးကြသည့်ဆင်ဖြူတော်ပုံကို ယခု ထပ်မံအသုံးပြုထားသော်လည်း အကောင်အရွယ်စား အငယ်စားကိုသာ အသုံးပြုထားသည်။ မြန်မာပြည်မြေပုံ၊ ကြာပန်းတို့၏ တဘက်တချက်တွင် ဆင်ဖြူတော် ၂ စီးကို တွေ့နိုင်မည်။
ကျောဘက်တွင် မန္တလေးမြို့ရိုးပုံကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ အမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်း ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က ၁ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ ထုတ်ဝေစဉ် တကြိမ်သာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ခြင်္သေ့ပုံများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခု ခြသေ့င်္နေရာတွင် ဆင် ၀င်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသည့် ငွေစက္ကူများ၏ အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရသည်။
၁ ကျပ် (၁၉၉၀) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် နဂါးသစ်ထွင်းပန်းပု
ပြား ၅၀ (၁၉၉၄) စောင်းကောက်
၁ ကျပ် (၁၉၉၆) ခြင်္သေ့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး လှေပြိုင်ပွဲ
၅ ကျပ် (၁၉၉၇) ခြင်္သေ့ နှင့် ခြင်းဝိုင်း
၁၀ ကျပ် (၁၉၉၇) ခြင်္သေ့ နှင့် ကရ၀ိတ်ဖောင်
၂၀ ကျပ် (၁၉၉၄) ခြင်္သေ့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်
၅၀ ကျပ် (၁၉၉၇) ခြင်္သေ့ နှင့် ရိုးရာလက်မှုပညာရှင်
၁၀၀ ကျပ် (၁၉၉၄) ခြင်္သေ့ နှင့် ရိုးရာလက်မှုပညာရှင်
၂၀၀ ကျပ် (၁၉၉၈) ခြင်္သေ့ နှင့် သစ်ဆွဲဆင်
၅၀၀ ကျပ် (၁၉၉၄) ခြင်္သေ့ နှင့် ပန်းပုပညာရှင်
၁,၀၀၀ ကျပ် ဆိုဒ်ကြီး (၁၉၉၈) ခြင်္သေ့ နှင့် ဗဟိုဘဏ်အဆောက်အအုံ
၁,၀၀၀ ကျပ် ဆိုဒ်သေး (၂၀၀၄) ခြင်္သေ့ နှင့် ဗဟိုဘဏ်အဆောက်အအုံ
၅,၀၀၀ ကျပ် (၂၀၀၉) ဆင်ဖြူ နှင့် လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ
၁၀,၀၀၀ ကျပ် (၂၀၁၂) ဆင်ဖြူ နှင့် မန္တလေးမြို့ရိုး
ဗဟိုဘဏ်က ယနေ့ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်း
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ အမျိုးအစားသစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်​ဝေပါမည်။
ငွေစက္ကူကို ပြည်သူများအား ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ငွေကြေးဌာနတွင် လည်းကောင်း၊ ဘဏ်များနှင့် အစိုးရ ငွေတိုက်များတွင် လည်းကောင်း ထုတ်ပေးပါမည်။
လက်ရှိ တရားဝင် လှည့်လည် သုံးစွဲလျက် ရှိသော ငွေစက္ကူ များနှင့် ငွေအကြွေများသည်လည်း တရားဝင် သုံးစွဲငွေ အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေစက္ကူအသစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
အရွယ်အစား။ ။ ၁၅×၇ စင်တီမီတာ
မျက်နှာစာဘက် ။ ။ ထိပ်ပိုင်းတွင် “မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်” စာတမ်း ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ အလယ်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် မြေပုံ၊ ၎င်းကို ဝန်းရံထားသော
သပြေခက် နှစ်ခက်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် တည်ရှိနေသည့် မြန်မာ့ အနုပညာ လက်ရာမြောက် ဆင်ဖြူတော် နှစ်စီးနှင့် ထိပ်တွင် ကြာဖြူတစ်ပွင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။
ငွေစက္ကူတန်ဖိုးကို ဖော်ပြထားသည့် မြန်မာ စာတန်း”တစ်သောင်းကျပ်” ကိုလည်း ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။
လက်ယာ ဘက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့ အနုပညာ လက်ရာမြောက် ကနုတ်ပန်းခက် များကို ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။
ထောင့်သုံးထောင့် တွင် ငွေစက္ကူတန်ဖိုးကို ဂဏန်း များဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ငွေစက္ကူတန်ဖိုးကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ လက်ဝဲဘက်ပိုင်းတွင် ကြာဖြူ ပွင့်ပုံ ရေစာ ပါရှိ ပါသည်။
ငွေစက္ကူတွင် လုံခြုံရေး ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဒေါင်လိုက် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ကျောဘက် ။ ။ ထိပ်ပိုင်းတွင် “CENTRAL BANK OF MYANMAR” စာတန်းကို ရိုက်နှိပ်ထားပြီး ၎င်းစာတန်း၏ အောက်တွင် “TEN THOUSAND KYATS” ဟူသော စာတန်း ပါရှိပါသည်။
အလယ်ပိုင်းတွင် ရတနာပုံ မန္တလေး နန်းတော်၏ မြို့ရိုးနှင့် ကျုံးပုံကို ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ဘေးဘောင်များတွင် မြန်မာ့ အနုပညာ လက်ရာမြောက် ကနုတ် ပန်းခက်များကို ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ထောင့် သုံးထောင့်တွင် ငွေစက္ကူ၏ တန်ဖိုးကို ဂဏန်းများဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။
4 Responses to တသောင်းတန် ထုတ်မည်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါမည်မဟုတ် – kyat 10,000 currency is on the way
စစစ on June 7, 2012 at 10:13 pm
ငါးထောင်တန်နဲ့ အတူ ရိုက်ပြီးသားပါ.အတူတူထုတ်ဖို့ ရှိတာ။ဒါပေမယ့်၊အဲဒီချိန်က၊ကုန်ဈေးနှန်း ပြသနာ ပေါ်မည်စိုးလို့ ၊တသောင်းတန်ကို၊ထားခဲ့တာ။
kyaw Zin on June 7, 2012 at 11:09 pm
Oh My God! This time it really dying!
မောင်ပျာလောင် on June 8, 2012 at 10:48 am
တစ်သောင်းတန်ဆိုတော့ မင်းသမီးက ပါးဆယ်ချက်ရိုက်လို့ ရပြီပေါ့ ? ? ?
chitthumoe22@gmail.com on June 10, 2012 at 5:16 pm
တက်ယ်တွေးပူတာက ရခိုင်ပြည်ဘက်ပါ တာဝန်ရှိသူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့ကြည့်ရှုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်လွှတ်မထားပါနဲ့